अनसन बाजेको अहंकार: कम्युनिष्टको सत्तोसराप, कांग्रेसको गुणगान ! (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । अनसन नबसी इलामबाट काठमाडौं फर्किएका डा. गोविन्द केसीले पत्रकारसम्मेलन गर्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘अतिनिकृष्ट’ शब्दमा गाली गरे । उनको आक्रोश कम्युनिष्टमाथि थियो । अझ भनौं कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारप्रति । प्रधानमन्त्रीलाई ‘तँ तँ र म म’को भाषामा तथानाम गाली गरे ।
कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुः पुष्पकमल दाहाल, सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराईलगायतको नामै किटेर केसीले सत्तोसराप गरे । सबै कम्युनिष्ट नेतालाई माफियाको उपमा दिए । सरकार र नेतालाई ‘नोकर’ भने ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई मार्सी चामलको भातमा बिकेको भन्दै ‘चोरी काम गरेर देश लुट्न पल्केको’ आरोप लगाए ।
नेकपा नेता एवम् संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेश भट्टराईप्रति केसी निकै आक्रामक देखिन्थे । उनले भट्टराईलाई ‘जनताको भुँडीमा लात मारेको’ भन्न भ्याए ।
कम्युनिष्ट सरकारलाई ‘जनतामारा, विद्यार्थीमारा, माफियावादी’ भन्दै सरकारविरुद्ध निरन्तर लडिरहने बताए । सरकारलाई चेतावनी दिदैं उनले भने, ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्नुस्, हामीसँग भएको सम्झौताको एक अक्षर पनि चेन्ज हुन दिनेवाला छैनँ ।’
यसरी कम्युनिष्टप्रति अतिआक्रामक भएका केसीले कांग्रेस नेता गगन थापाप्रति आभार प्रकट गरे । थापाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।
आफूलाई सत्याग्राही भन्न रुचाउने प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका पछिल्ला अभिव्यक्ति निकै विवादित बनेको छ । केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘अतिनिकृष्ट’ शब्दमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सत्तोसराप गरे ।
सरकारी सेवा÷सुविधा लिएर विद्यार्थीलाई ज्ञान बाँड्ने, सुशासनको चर्का कुरा गर्ने, मर्यादाको पाठ पढाउने केसी संसद, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति यति तुच्छ हदमा ओर्लिएलान भन्ने सायद कसैले सोचेका थिए । एक रिपोर्ट
सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा आक्रोशितरुपमा प्रस्तुत भएका डा. गोविन्द केसीले सरकार, सरकार नेतृत्व दल र नेताहरुको चर्को आलोचना मात्रै गरेनन् । विशेषतः कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई दलाल, माफिया र जनतामाराको आक्षेप लगाए, निकै तल्लोस्तरमा ओर्लिएर ।
डा. केसीको मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला, उनको अनसन श्रृंखलाले दिएको र दिने सार्वजनिक प्रतिफल पनि आफ्नै ठाउँमा होला । जसको पक्ष र विपक्षमा जति पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर, सत्याग्रही भन्ने र नैतिक शिक्षा पढाउने केसीले व्यक्त गरेको ‘तुच्छ’ अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको नेतृत्व र सदस्यले केसीले आफूप्रतिको सम्मान आफैंले गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
डा.केसीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रयोग भएका भाषा र शैली अस्वभाविक थियो
राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्दै उनले जस–जसको, जसरी उछितो काढेका छन् त्यसको उनीप्रतिको मर्यादा मात्रै घटाएको छैन, मुद्दा पनि कमजोर बनाउने हो कि भन्ने शंका बढेको छ ।
अभिव्यक्ति मात्रै होइन । केसीको शैली संसद र सरकारभन्दा आफू माथि हुँ भन्ने प्रकृतिको छ । संसदीय समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा समेत नजाने अनि बाहिर–बाहिर जथाभावी बोल्दै हिँड्नुले केसीको नियतमाथि नै शंका उब्जाएको छ । तर, समर्थक उनका हरेक गतिविधिजस्तै पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पनि ‘जायज’ ठान्छन् ।
केसीका माग र मुद्दामा आफ्नो ठाउँमा होला । तर, कुनै दलको पक्ष र कुनैको विपक्षमा, कुनै नेताको आलोचना र कुनैको प्रशंसामा, वाद र विचार निर्देशितजस्तो अभिव्यक्ति दिने छुट एउटा सरकारी कर्मचारीलाई छैन र हुनु हुँदैन पनि ।